Wholesale Enteral sakafo famahanana mpamokatra sy mpamatsy | LINGZE
Sets famahanana fidirana
PVC kilasy fitsaboana, tsy misy DEHP, tsy misy tara
Kitapo tokana tsy misy fetra
Tenda henjana ho famenoana sy fikirakirana mora, fikirana samihafa ho an'ny safidy
√ Ny fantsom-pisakafoana fidiram-bola azo ampiasaina dia misy karazany efatra ho an'ny fanomanana sakafo mahavelona: kitapo paompy kitapo, kitapom-batsy, kitapo paompy ary setatry ny hery misintona.
√ Raha fonosina na vovoka am-bifotsy ny fiomanana amin'ny sakafo dia ho voafantina ny kitapo. Raha fanomanana fihinanan-tsiranoka tsotra ny tavoahangy / kitapo dia hofidina ny setrin'ny spike.
√ Ny paompy paompy dia azo ampiasaina amin'ny marika maro samihafa amin'ny paompy sakafo Enteral.
Mahatonga ny famakafakana sy ny fitsaboana ny fanakanana ny fantsom-pamokarana fidirana
Ny fanjarian-tsakafo enteral dia iray amin'ireo fomba hanomezana ny vatan'olombelona ny otrikaina ilaina amin'ny alàlan'ny lalan-dra. Ny fomba lehibe indrindra dia ny famahanana fantsona sy ny fitantanana am-bava. Ny fividianana fantsom-boaloboka dia matetika misy fantsona nasogastrika / tsinay, gastrostomy endoskopika percutanesy, fantsom jejunostomy ary jejutanostomy endoscopic Percutaneous, sns. ahenao ny fahafahan'ny aretina. Ity fomba fiasa ity dia mety amin'ny fanaraha-maso, azo antoka ary ara-toekarena, ary azo amin'ny fampiharana ara-pahasalamana. Ampiasaina betsaka, fa amin'ny fizotran'ny famahanana fantsona, voakasiky ny anton-javatra maro samihafa, dia mora tratran'ny olan'ny fanakanana ny fantsona, ary avy eo ny fisian'ny hetsika fitrandrahana tsy voaomana.
Raha ny filazan'ny manampahaizana manokana dia izao no antony manentsina ny fantsom-pahalalana sakafo ao amin'ny tsenan-komana:
1. Fakantsary mifandraika amin'ny Tube
Ny tsy fanamboarana araka ny tokony ho izy ny catheter aorian'ny fivadibadihana, nahatonga ilay ampahany niharihary hanodinkodina sy hikorontana; ny kohaka, ny fisaleboleboana ary ny fandoavana matetika dia mahatonga ny fantsom-pisakafoanana hikororoka ao am-bava, tenda, na ao amin'ny tsinay, izay antony mekanika mahazatra amin'ny fanakanana ny fantsona. Tao amin'ny fandinihana dia hita fa ny tahan'ny fanakanana ny fantsona naso-tsinay dia avo kokoa noho ny fantsona nasogastrika, izay noheverina fa mifandraika amin'ny savaivony tery kokoa amin'ny fantsona naso-tsinay sy ny halavan'ny lava ao amin'ny vatana. . Rehefa elaela sisa no avela ilay fantsom-pisakafoana dia lasa masiaka ny rindrina anaty fantsona noho ny fikaohin'ny fanafody sy ny vahaolana mahavelona ary ny harafesin'ny ranon-tsavony izay mahatonga ny vahaolana otrikaina mora mihantona amin'ny rindrina. Ho fanampin'izany, mihantona ela loatra ny fampidirana, miadana loatra ny hafainganan'ny fampidirana, ary mamoaka rà ny lalan-dra avy eo aorian'ny fandidiana, ka mahatonga ny lalan-drà manakana ny fantsona.
2. Vahaolana vahaolana mahavelona
Avo loatra ny fifantohan'ny vahaolana mahavelona, ​​miadana loatra ny hafainganan'ny pumping, misy cellulose ny vahaolana mahavelona ary antony hafa mahatonga ny vahaolana otrikaina ho mora tohina amin'ny rindrina anatiny ny lumen, izay manenjana ny lumen ary mampitombo ny fahafahan'ny lumen fanakanana. Ny fanadihadiana dia naneho fa ny tahan'ny fampidirana vahaolana mahavelona dia tsy misy akony firy amin'ny fikatonan'ny fantsona, saingy hita ara-pahasalamana fa rehefa ampiasaina hanafanana ny vahaolana mahavelona ny heater, raha miadana loatra ny hafainganam-pandeha, ny vahaolana mahavelona dia ho hafanana be loatra ary nasiana demaolo hanamboarana akanjo. Sakano ny fantsona. Ho fanampin'izany, mandritra ny fotoana misimisy ny sakafom-pidirana fidirana, ny vahaolana mahavelona ao amin'ny làlam-pandevonan-kanina dia mety hanakana ny fantson-tsakafo noho ny reflux noho ny kohaka mafy, ny fievohana, ny fandoavana ary ny antony hafa.
3. Anton'ny mpitsabo mpanampy
Ny antony lehibe manentsenana ny fantsom-pahalalana sakafo dia ny tsy fanaovan'ny mpitsabo mpanampy amin'ny fomba hentitra araka ny fepetra voafaritra, na diso ny fomba fanosehana. Nandritra ny fandidiana, ny mpitsabo mpanampy dia tsy nanana fahalalana manokana momba ny sakafo mahavelona. Nandritra ny fizotran'ny fikosehana dia tsy afaka nanao hetsika isan-karazany mifanaraka amin'ny lalàna izy ireo ary tsy voafehy ara-dalàna ny fotoana fanosehana. Ny asidra sy ny alkalinan'ny tsindrona dia samy hafa. Rehefa tsy voatsabo amin'ny fomba hafa ny zava-mahadomelina dia hosakanana ny fantsona. Raha toa ka tsy afaka manao asa isan-karazany mifanaraka amin'ny toromariky ny dokotera ny mpitsabo mpanampy, ny fanampim-panafody zava-mahadomelina ho an'ny famahanana fantsona na ny tsy firaharahiany ny sakafo ara-tsakafo fidiran'ny fantsona, ny fijanonana tampoka mandritra ny dingan'ny fampidirana ny vahaolana mahavelona dia mety hampitombo ihany koa ny mety ny fikatonan'ny fantsona. .
4. Ireo antony mahatonga ny marary
Ny marary dia tsy manana fahalalana momba ny mpitsabo mpanampy, ary tsy afaka manatanteraka ny fitantanana ny tenany sy ny fikolokoloana ny fantsom-pamokarana amin'ny fomba ara-potoana sy mahomby. Ohatra, ny marary dia mampiato ny famoahana vahaolana otrikaina samirery noho ny antony maro samihafa.
Ho valin'ireto antony voalaza etsy ambony ireto hanakanana ny fantsom-pahalalana sakafo dia afaka mandray ireto fepetra fisorohana ireto izahay:
Safidio ny vahaolana mahavelona mifanaraka amin'ny toetran'ny marary
Mandritra ny dingan'ny tsindrona vahaolana mahavelona, ​​manandrama mifidy vokatra misy fifantohana ambany. Raha te hampiditra vahaolana mahavelona miaraka amin'ny fifantohana avo ianao dia tokony hosotroinao alohan'ny tsindrona. Alohan'ny hampiasana ny zava-mahadomelina dia tokony hohozongozonina ilay fanafody. Mandritra ny fampiasana azy, raha mipoitra ny singa mahavelona dia tokony hohozongozonina ihany koa izy. Amin'ny dingan'ny tsindrona zava-mahadomelina dia tsy azo afangaro amin'ny fanafody hafa izy io mba hisorohana ny fihetsiky ny simika, izay miteraka fihenan'ny fiorenan'ny akora sy ny firotsahan'ny otrikaina .
Safidy mety amin'ny fantsom-pisakafoanana sakafo enteral
Raha tsy afaka mandray sakafo amin'ny vava ny marary, dia tokony hozahana ny toetran'ny marary, tokony hofakafakaina ny rafitry ny vavonin'ny gastrointestinal ary tokony hofidina ny hatevin'ny fantsona mety hisorohana ny fisian'ny fikatonan'ny fantsona. Ny anarana, ny halavany, sns amin'ny fantsom-pamahanana an'ny marary dia tokony hosoratana, ary ny fantsona dia tokony hosoloina ara-potoana mba hisorohana ny fantsona tsy hampiasa aorian'ny fametahana sy fanovana matotra .
Miezaha mampiasa enteral sakafo paompy sy paompy mifanentana napetrakas
Miezaha mampiasa paompy mahavelona fidirana, marina ny fanaraha-maso ny hafainganana, fanairana mandeha ho azy raha sanatria misy fanakanana ny fantsona, mety, haingana, ara-potoana ary mahomby. Ny fampiasana fijanonana fampidirana mihetsika dia hampihena ny enta-mavesatry ny fitaizan-jaza ary hisorohana andian-doza mety hikatona fantsona toy ny fanemorana ny fandroana sy ny fikororohana ny fantsona nateraky ny fampiatoana ny sakafo ara-dalàna fidirana noho ny fitsanganan'ny marary teo am-pandriana. Toy izao manaraka izao ny fomba: amboary ny paompy mahavelona amin'ny fipetrahana fampidirana mihetsika, ampiasao ny herin'ny AC rehefa mandry eo am-pandriana ilay marary, ary alao antoka fa miasa ara-dalàna ny herin'ny bateria rehefa miala eo am-pandriana .
Hamafiso ny fanabeazana ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa mpitsabo
Hamafiso ny fahatsapana ny andraikitry ny mpitsabo mpanampy, mifantoka amin'ny fanofanana matihanina amin'ireo mpitsabo mpanampy tanora, ary manatsara hatrany ny kalitao sy ny fahaizan'ny asa matihanina. Avelao ny mpiasa mpitsabo mpanampy hanana fahatsiarovan-tena amin'ny fantsom-panafody manohitra ny fanakanana ary handray andraikitra hanao fanaraha-maso tsy tapaka mba hisorohana ny enta-mavesatra ara-toekarena sy ny voka-dratsy ateraky ny marary vokatry ny faharetan'ny fitsaboana . Mba hisorohana amin'ny fomba mahomby ny fanakanana ny fantsom-pisakafoanana, alohan'ny tsindrona ny vahaolana mahavelona dia tokony hamarinina ireo vahaolana mahavelona samihafa, ary tokony horaisina ny teknika fikojakojana fantsona mifanaraka amin'izany mba hahazoana antoka fa ampiasaina amin'ny fivoarana malemy kokoa ny fantsona. Ny tsindrona pulsa dia azo ampiasaina ihany koa mba hiteraka vortex kely mandritra ny fizotran-tsiranoka ao amin'ny lumen, izay afaka mamoaka ireo zavatra miraikitra amin'ny rindrina fantsona ara-potoana.
Hamafiso ny fanabeazana ara-pahasalamana ho an'ireo marary
Ny mpiasa mpitsabo mpanampy dia tokony hanamafy ny fanabeazana ara-pahasalamana amin'ny sakafo ara-dalàna fidirana, mamolavola fanafody manokana, ary avelao ny marary sy ny fianakaviany hahatakatra fahalalana mifandraika ary handray anjara mavitrika. Ho an'ireo marary tsy ampy fahalalana ara-pahasalamana dia tokony homena lanja ampy ny antony ara-tsaina sy ara-psikolojika. Alohan'ny hampiharana sakafo ara-dalàna, dia tokony hohazavaina amin'ny antsipiriany ny lanjany, ny lanjany ary ny fomba fampiharana ny sakafon'ny enteral. Mandritra ny dingan'ny fampiharana dia matetika mifandray amin'ny marary izahay mba hahatakarana ny fihetsika ara-tsaina sy ara-batana ary hanome fanampiana ara-tsaina. Araka ny haavon'ny kolontsaina sy ny fahaizan'ny mianatra ny marary sy ny fianakaviany, ny fomba mety dia voafantina hanatsarana tanteraka ny hafanam-pon'ireo marary sy ny fianakaviany amin'ny fianarana, izay manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fikarakarana ara-pahasalamana enteral klinika.
Famelomana ny orona amin'ny orona
Rehefa atsindrona ny zava-mahadomelina dia tokony ho potehina tanteraka sy hotorotoroina hamorona vovoka izy io, ary aorian'ny famongorana azy tanteraka (voasivana amin'ny gazoala raha ilaina), dia atsindrona mivantana. Sasao amin'ny rano mafana 20ml ny lumena alohan'ny aorinan'ny fanindronana mba hisorohana ny vahaolana amin'ny zava-mahadomelina sy otrikaina tsy hidona ao anaty lumen ary hiteraka fikatsoana. Ny filaharana fitantanan-draharaha dia: ajanony ny rano mitete vahaolana mahavelona → fandroana → fatra (endrika ranona) → atsofohy indray → atsangano indray ny ranon-tsavony otrikaina. Tsy tokony hatao ny manome fanafody avy amin'ny fantsona naso-tsinay. Ny fanafody sasany (toy ny Losec, izay voaporofo fa mora tokoa amin'ny fanakanana ny fantsona) dia asaina omena amin'ny fantsona gastric.
Ny sisan-tsofina mamelona ny orona sisa tavela izay hita eo amin'ny faran'ny fantsom-pamokarana fidirana fidirana dia famantarana loza hanakanana ny fantsona.
Fitsipi-pitsarana momba ny fantsona voahitsakitsaka: ny fantsom-pisakafoanana amin'ny gastrointestinal dia tsy nosakanana, ny sakafo dia tsy mora tsindrona, ary tsy misy ranoka averina mandritra ny fizotran'ny sakafo. Raha mampiasa syringe ianao hanodinana moramora ilay fitsapana ary mbola misy ny fanoherana, na raha mampiditra rano mafana 20ml ianao ary mbola tsy milamina ny taham-pivoarana dia voasakana ny fantsona .
Ho an'ny fanakanana ny catheter izay nitranga dia tokony hamantatra am-pahavitrihana ny antony ny mpiasa mpitsabo antsika, hahatakatra ny fomba fanakanana ary hisafidy ny fitsaboana sahaza azy. Ny fomba fitrandrahana klinika mahazatra ampiasaina dia azo zaraina amin'ny fomba ara-batana sy fomba simika arakaraka ny fototr'izy ireo .
Ny fomba ara-batana dia misy ny fametahana miampy ny fihenan-tsofina ary ny fomba fitadiavana tariby tariby.
(1) Fomba fikosehana miampy tsindrona tsindry ratsy: Rehefa hita fa voasakana ao anaty fantsona misy otrikaina ny vahaolana otrikaina, kosohy ilay faritra ivelan'ny fantsona misy otrikaina, ary miaraka amin'izay dia ampiasao ny tsindrona 20ml hantsaka rano mafana 10ml hiverina. Eo ambanin'ny hetsiky ny hery ivelany dia mihintsana ilay vongana mifikitra amin'ny fantsom-pamokarana ary mivoaka avy ao amin'ny fantsom-pisakafoanana noho ny faneren'ny tsindry ratsy. Mandritra izany fotoana izany, ny syringe dia ampiasaina hampidirana rano mafana ao amin'ny fantsom-pisakafoanana handrindrana ny fantsom-panafody, miverimberina imbetsaka mandra-pahatongan'ny tsy fanakanana. Ity fomba ity dia ampiasaina amin'ny klinika kokoa, satria ny fantsona nasogastric dia ampidirina mavesatra kokoa ary lava ny ampahany miharihary, noho izany dia mety kokoa izy io. Na izany aza, ny fantsona naso-tsinay dia atsofoka lalina ao amin'ny vatana ary fohy ilay faritra miharihary ka manasarotra ny fanatanterahana ilay fomba fikosehana.
(2) Fomba fanamoriana tariby tariby: ampidiro ao anaty lumenan'ny fantsom-pifandraisana ny tariby mpitari-dalana, ary ampiasao ny hery mekanika hanakobohana ilay fantsom-pisakafoanana voasakana. Marihina fa ho an'ireo marary amin'ny fotoana lava catheterization, ny hery tafahoatra dia mety hiditra amin'ny fantsom-pahalalana sakafo, ka miteraka famoahana vahaolana mahavelona ary manimba ny lalan-dra mandevon-kanina aza.
Ny fomba simika dia mampiasa zava-mahadomelina hamongorana ny fanakanana. Ny zava-mahadomelina ampiasaina matetika dia misy ny anzima fandevonan-kanina sy ny vahaolana sodium bicarbonate.
(1) Arotsaho anaty rano mafana ny anzima fandevonan-kanina ary atsofohy ao anaty tsindry miaraka amin'ny syringe misy savaivony kely 10ml na latsaka ny fantsona otrikaina voadio. Ny anzima fandevonan-kanina dia matetika mampiasa ny asan'ny digestif an'ny anzima mba handevona ireo sakafo voasakana ao anaty fantsona otrikaina ao anaty molekiola kely hanakanana ny fantsona misy otrikaina. Vahaolana sodium bicarbonate 5% dia vahaolana alkaline, ary ny singa lehibe amin'ny vahaolana otrikaina enteral dia maltodextrin, casein, menaka legioma, mineraly, lecithin, vitamina ary singa manaporofo, mampiseho asidra malemy, bicarbonate sodium 5% Ny vahaolana dia mety hahafoana ny asidra sasany akora simika ary levona toy ny lecithin. Misy ny tatitra ao amin'ny literatiora fa ny rotsakorana ateraky ny zava-mahadomelina dia azo ahitsy amin'ny antagonista (sodium bicarbonate, hydrochloric acid) hamerenana amin'ny laoniny ny fantsona. Ny fandinihana dia nahatsikaritra fa ny fantsona feno otrikaina voasakana tanteraka dia nohosorana vahaolana 5% ny sodium bicarbonate. 10 minitra dia afaka mamaha ny vahaolana otrikaina ao anaty fantsona misy otrikaina miaraka amin'ny 2-3 cm ny halavany, ary 20 minitra dia afaka mamaha ny vongan-tsiranoka misy otrikaina ao anaty fantsona misy otrikaina miaraka amin'ny 4-5 cm ny halavany. Saingy, saika tsy misy ny vokatra azo rehefa mivoaka amin'ny rano mafana amin'ny 50°C mandritra ny 20 minitra. Ny fetran'ity fomba ity dia ny ankamaroan'ny fanakanana ny fantsom-pahasalamana amin'ny fampiharana ara-pahasalamana dia mitranga any amin'ny tendrony lavitra, ka sarotra ny manatona ilay fanafody ranoka voadona.
(2) Koa satria ny vahaolana sodium bicarbonate dia misy fiantraikany mivaingana amin'ny famoahana vahaolana mahavelona sy ny fikolokoloana zava-mahadomelina, ny sampana misy anay dia misafidy ny vahaolana sodium bicarbonate ho fanafody hanadio ny fantsona otrikaina voakenda. Ho an'ny fantsom-pisakafoanana voasakana ampahany, ny vahaolana sodium bicarbonate dia ampiasaina mivantana mba hahatonga azy ireo tsy ho voasakana, ary ny fantsom-pisakafoanana voasakana tanteraka dia mampiasa fantsona fanitarana intravenous. Ny fantsom-panafarana intravenous dia matetika ampiasaina amin'ny klinika mba hampidirana zava-mahadomelina ao anaty paompy mihombo. Malemy ilay fitaovana ary manana hatraiza hatraiza. Mora ny mampiditra ao anaty fantsom-pisakafoanana nefa tsy misy atahorana hanimba ny fantsom-pisakafoanana. Rehefa avy nanapaka ny sivana fanafody ranoka dia 128cm ny lavany ary 2.1mm ny savaivony ivelany. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny maodely sy tsipiriany momba ny fantsom-pisakafoanana Baitong izay matetika ampiasaina amin'ny mpianatra tsy mianatra. Rehefa tonga eo amin'ilay toerana voasakana ilay fantsona fanitarana, dia atsofohy rano mafana avy amin'ilay fantsona fanitarana mba hampidirana ny lumena avy ao anatiny ka hatrany ivelany, izay afaka misoroka ny lamba tsy hianjera amin'ny rindrina rehefa mibontsina avy any ivelany mankany anatiny ary mampitombo ny risika. ny fikatsoan'ny fantsona otrikaina. Ankoatr'izay, satria ny zava-mahadomelina dia afaka mihetsika mivantana amin'ilay ampahany voasakana, dia nohafohezina ny fotoana ilaina hamongorana ny fanakanana. Ny fampiasana klinika dia manaporofo fa ny vokatra mitambatra amin'ny fantsom-pamokarana intravenous sy ny vahaolana sodium bicarbonate dia mampihena be ny fotoana ilaina hamongorana ny fanakanana, ary misy fiarovana sy vokatra miharihary. Amin'ny fampiasana klinika dia tokony horaisina ny saina: satria ny vahaolana sodium bicarbonate dia alkaline, ny habetsaky ny tsindrona ao amin'ny làlam-pandevonan-kanina dia tsy tokony ho be loatra. Raha vantany vao tafaverina amin'ny laoniny ny fantsom-pisakafoanana dia azo esorina amin'ny rano mafana miverimberina izy io mba hanosehana tanteraka ny rindrina fantsona sisa tavela. tanjona. Rehefa lehibe ny habetsaky ny fikosehana dia tandremo ny fandanjalanjan'ny asidra sy ny marary ary miaraka amin'izay dia diniho tsara raha marary an-kibo sy tsy mahazo aina ny kibo ilay marary.
Ny fanjarian-tsakafo enteral dia tsy vitan'ny manome ny sakafo ilaina ho an'ireo marary sy marary marary aorian'ny fandidiana ny lalan-drà amin'ny gastrointestinal, fa koa mampandeha ny rafitra nerve-endocrine enteric, mampiroborobo ny peristalsis amin'ny tsinay sy ny fitomboan'ny mucosal, mitazona ny hery fiarovan'ny vatana ary ny fiasan'ny sela amin'ny rindrin'ny tsinay. , amin'izany dia mitazona ny hery fiarovan'ny vatana. Ny fanjarian-tsakafo enteral dia fomba fitsaboana lehibe. Ny fisorohana sy ny fidirana an-tsehatra amin'ny fanakanana ny fantsom-pahalalana sakafo no laharam-pahamehana amin'ny asan'ny mpitsabo. Amin'ny asan'ny mpitsabo mpanampy amin'ny klinika, dia tsy maintsy jerentsika ny antony mahatonga ny fanakanana fantsona otrikaina, ary hanao fitsabahana an-tsokosoko, mba hampihenana amin'ny fomba mahomby ny trangan'ny fahasarotana ataon'ny marary, hanatsarana ny tsy fanjarian-tsakafo ary hanatsara ny fahombiazan'ny klinika.
Momba ny fitaovana - ny fitaovantsika tsy misy DEHP
1.Ny plastika DEHP dia tsy mifandray amin'ny firafitry ny molekiola PVC amin'ny alàlan'ny fatorana simika, ary mora ny miakatra avy ao anaty akora ao anaty ranoka rehefa mifandray amin'ny rano na ranon-dronono mety levona.
2.DEHP dia mety misy loza mitatao toy ny carcinogenicity sy ny poizina fananahana. Firenena maro eto amin'izao tontolo izao no mandrara ny fampiasana ny DEHP amin'ny vokatra fitsaboana.
3.Ny fantsom-pisakafoana Enteral Enterable dia mampiasa plastika vaovao, izay kely ny rotsakorana ary tsy hangonina ao amin'ny vatana. Mifanaraka amin'ny fenitry ny vokatra kilasy fitsaboana izany ary mety amin'ny marary misakafo.
Napetraka ny hery misintona
Fanavahana ny lokon'ny vokatra
Ny lokon'ny fonosana fihinana Enteral azo atsimo dia volomparasy / manga. Ny fantsona volomparasy / manga dia mazava ho azy fa tsy mitovy amin'ny fantsona fampidirana intravenous mba hisorohana ireo loza miafina ara-pahasalamana amin'ny fanararaotana diso ny fanomanana fidirana ao amin'ny lalan-drà.
Famolavolana antsipirihany ny hatsarana
Tandremo ny lafiny rehetra amin'ny fampiasana klinika
Fifanarahana fanjaitra amin'ny torolàlana an'habakabaka, mifanentana matanjaka, fifandraisana haingana amin'ireo fanomanana ranon-javatra mahazatra, tsy mila mampiasa fanjaitra fitarihana rivotra, loaka fitarihana rivotra mifamatotra amin'ny sivana rivotra mba hisorohana tsara ny fandotoana rivotra 3-2. Ny halavan'ny fantsona ambony dia mizara karazany roa: 95 sm sy 75cm, izay mety amin'ny karazana lalamby an-danitra sy ny karazana fampidirana karazana gorodona 3-3. Ny fantsona ambany dia misy mpampifandray iraisam-pirenena (Y-type) mahazatra iraisampirenena, izay ahafahana manamboatra na mamono ny fantsona 3-4. Ny mpampitohy fantsom-pisakafoanana trapezoidal mahazatra dia tsy azo esorina, mety amin'ny fampifandraisana fantsom-pahasalamana isan-karazany amin'ny savaivony samihafa.
Teo aloha: Fantsona ra hemodialisis
Famahanana fidirana mitohy
Sets fandefasana fidirana
Fandraisana fitantanan-tsakafo Enteral
Kitapo famahanana fidirana
Kitapo famahanana fidirana ho an'ny hery misintona
Kitapo misintona famelomana
Toeram-pisakafoanana mihinana Enteral
Fantsom-pifandraisana gravité fampidirana
Paompy famahanana fidirana
Kitapo paompy manome sakafo
Tube fantsom-pamokarana fidirana
Paompy fampidirana fidirana fidirana
Poka famahanana fidirana
Kitapo sakafo mahavelona
Paompy sakafo mahavelona
Paompy famahanana ho an'ny Tube Tube G
Fametrahana paompy famahanana
Paompy manome sakafo
Karazana paompy manome sakafo
G Tube Famahanana olon-dehibe
G Tube Fahanana Gravity
Famahanana fidirana amin'ny hery misintona
Famahanana Tube Tube
Famahanana fidirana an-tsokosoko
Kitapo famahanana hery misintona lehibe
Famahanana Tube Tube sakafo
Tanjona famahanana Tube Tube Nasogastric
Tube fihinam-bika amin'ny silika
Famahanana Tube avy amin'ny Gravity